အရက်သောက်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်သော အသည်းအဆီဖုံးခြင်း | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အရက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အသည်းအဆီဖုံးခြင်းသည် ကမ်ဘာ့တစ်၀ှမ်းလုံးတွင် ဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက် လျက်ရှိသည်။ နာမည်အခေါ်အေဝါ်အတိုင်းပင် အရက်နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိဘဲ အသည်းအဆီဖုံးခြင်းဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းမှာ အသည်းဆဲ(လ်)များတွင် အဆီများ လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုစုေ၀းလာခြင်းကြောင့်ဖြစ် သည်။ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် အသည်းရောင်ရမ်းခြင်း၊ အသည်းတွင်အမာရွတ်ဖြစ်ခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးတွင် အသည်းပျက်စီးခြင်းထိဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုဆိုးရွားသောအဆင့်တွင်မူ အသည်းခြောက်ခြင်းနှင့် အသည်းလုပ်ဆောင်မှုရပ်တန့်ခြင်းများ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာမျှ မတွေ့ရပေ။ အကယ်၍ တွေ့ရှိရပါက အောက်ပါတို့ကို သာ တွေ့နိုင်သည်။
3. ၀မ်းဗိုက်ညာဘက်အပေါ်နားတစ်၀ိုက်တွင် အောင့်ခြင်း
အရက်သောက်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်သော အသည်းအဆီဖုံး၍ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် အသည်းခြောက်ခြင်း (အမာရွတ်များ ဖြစ်နေသောအဆင့်) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ရောဂါလက္ခဏာများမှာ -
2. အရေပြားအောက်ရှိ သွေးကြောများဖောင်းလာခြင်း
3. အမျိုးသားများတွင် ရင်သားများကြီးလာခြင်း
2. အင်ဆူလင်ဟုခေါ်သော သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးသော ဟော်မုန်းတစ်မျိုးကိုခန္ဓာကိုယ်မှ မသုံးနိုင်ခြင်း
3. ခန္ဓာကိုယ်တွင်း၌ သကြားဓာတ်မြင့်တက်နေခြင်း (ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ချေရှိသူများ (သို့) ဆီးချိုရောဂါသည်များ)
4. ခန္ဓာကိုယ်တွင် အဆီဓာတ် (အထူးသဖြင့် Triglyceride) အလွန်အမင်းမြင့်တက်နေခြင်း
အထက်ပါကျန်းမာရေးပြဿနာများသည် အသည်း၌အဆီများစုပုံမှုဖြစ်ပွားစေရန် တွန်းအားပေးသကဲ့သို့ရှိသည်။ အချို့သူများတွင် အဆီများစုပုံလာခြင်းကြောင့် အသည်းကိုအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပြီး အသည်းရောင်ရမ်းခြင်းအပြင် အသည်းအဆီဖုံး၍ ရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါကိုပါ ခံစားနိုင်သဖြင့် နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်လည်း အသည်း၌ဒဏ်ရာအမာရွတ်များကို ကျန်ရှိစေတတ်သည်။
အရက်ကြောင့်မဟုတ်သော အသည်းအဆီဖုံးခြင်းကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းများမှာ-
1. သွေးတွင်းအဆီ (ကိုလက်စထရော) မြင့်တက်ခြင်း
2. Trigylceride ဟုခေါ်သော အဆီတစ်မျိုးမြင့်တက်နေခြင်း
4. အ၀လွန်ခြင်း (အထူးသဖြင့် ၀မ်းဗိုက်၌အဆီများစုပုံလာခြင်း)
5. သားဥအိမ်၌ အရည်အိတ်များတည်ခြင်း
6. အိပ်ပျော်စဉ် အသက်ရှုရပ်ခြင်း
7. ဆီးချိုရောဂါအမျိုးအစား (2)
9. ပစ်ကျူထရီဂလင်းဟုခေါ်သော ဦးနှောက်အတွင်းရှိအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သော ဟော်မုန်းများ မထုတ်နိုင်ခြင်း
နောက်ဆက်တွဲ အသည်းရောင်ရမ်းခြင်းကမူ အောက်ပါအခြေအနေတို့တွင် ပိုမိုဖြစ်နိုင်ချေများသည်။
3. အ၀လွန်၍ ၀မ်းဗိုက်၌ အဆီစုပုံနေသူများ
အထက်ပါအခြေအနေနှစ်ရပ်လုံးတွင် အဓိကဖြစ်စေနိုင်သော ဆိုးကျိုးမှာ အသည်းခြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အသည်းရောင်ရမ်းခြင်းကိုမကုသပါက အသည်းဆဲလ်များကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။
- ၀မ်းဗိုက်၌ အရည်များစုပုံလာခြင်း
- အစာရေမြိုသို့ထောက်ပံ့ထားသော သွေးကြောများဖောင်းလာခြင်း (ပေါက်ပြဲ၍ သွေးထွက်လွန်ခြင်းထိဖြစ်နိုင်)
- အသည်းအဆိပ်များကြောင့် အသိဉာဏ်ေ၀ဝါးလာခြင်း၊ မှိန်းခြင်း၊ စကားပြောလေးလာခြင်း (ဦးနှောက်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများထိခိုက်ခြင်း)
- အသည်းလုပ်ဆောင်ချက်များရပ်တန့်သွားခြင်းထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
အရက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အသည်းအဆီဖုံး၍ အသည်းရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါခံစားနေရသူ 20% ခန့်သည် အသည်းခြောက်ခြင်းထိ ဖြစ်ပွားစေတတ်သည်။
အထက်တွင်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ဤရောဂါသည် မည်သည့်ရောဂါလက္ခဏာမျှ မပြတတ်ခြင်းကြောင့် အခြားအကြောင်းအရင်းဖြင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ရာမှ အသည်းတွင်ပြဿနာရှိနေကြောင်း အမှတ်မထင် ရှာဖွေတွေ့ရှိရတတ်သည်။ အာထရာဆောင်းဟုခေါ်သော ဓာတ်မှန်တွင် အသည်း ပုံမမှန်ခြင်း (သို့) သွေးတွင်း၌ အသည်းအင်ဇိုင်းဓာတ်များ များ/နည်း နေခြင်းကြောင့်သာ ရောဂါရှိကြောင်းသိရခြင်းဖြစ်သည်။
ရောဂါရှာဖွေရန်နှင့် ရောဂါ၏ဆိုးရွားအဆင့်ကိုသတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုသော စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများမှာ -
- သွေးနီဥ/သွေးဖြူဥ စသည်ဖြင့် အရေအတွက်ကိုစစ်ဆေးခြင်း
- အသည်းရောင်အသားဝါ A, C စသည်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း
- စီးလိယက်ဟုခေါ်သော အူရောဂါတစ်မျိုး ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း
- အစာမစားမီသွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို စစ်ဆေးခြင်း
- ဆီးချိုထိန်းသိမ်းမှုကောင်းမကောင်း စစ်ဆေးခြင်း
- သွေးတွင်းအဆီဓာတ် စစ်ဆေးခြင်း
အယ်ထရာဆောင်း (ခေါ်) တယ်လီဗီးရှင်းဓာတ်မှတ်ရိုက်ခြင်း
အများအားဖြင့် ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်ဟုထင်ရသောသူများတွင် ရိုက်လေ့ရှိသည်။
၀မ်းဗိုက်ကို ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန် (CT) (သို့) သံလိုက်ဓာတ်မှန် (MRI) ရိုက်ခြင်း
- အသည်းခြောက်ခြင်းရှိ/မရှိကို တယ်လီဗီးရှင်းဓာတ်မှန် တစ်မျိုးဖြင့်တိုင်းတာခြင်း (transient elastography)
- အသည်းခြောက်ခြင်းရှိ/မရှိကို သံလိုက်ဓာတ်မှန်တစ်မျိုးဖြင့် ပုံဖော်ကြည့်ရှုခြင်း (Magnetic resonance elastography)
အကယ်၍ အခြားစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများဖြင့် ရောဂါအတိမ်အနက်ကို မဖော်ထုတ်နိုင်ပါက အသည်းမှအသားစကိုယူ၍ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၀မ်းဗိုက်မှတဆင့် အပ်ထိုးသွင်း၍ အသည်းအသားစကိုယူခြင်းကြောင့် နာကျင်မှုကိုအနည်းငယ်ခံစားရနိုင်ပါသည်။
ဦးစွာပထမပြုလုပ်သင့်တာကတော့ ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန် အစားအသောက်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်၏ 10% အလေးချိန်ကိုလျှော့ချရန် လိုအပ်သော်လည်း 3-5% ထိလျှော့ချပြီးပါက ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို အတော်အသင့်လျှော့ချပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် အလွန်အမင်းအလေးချိန်လျှော့ချရန် လိုအပ်သူများအတွက် လိုအပ်ပါကခွဲစိတ်ကုသမှုကို ခံယူသင့်သည်။
အသည်းထပ်မံပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် အသည်းရောင်အသားဝါ A နှင့် B ကာကွယ်ဆေးများကို ထိုးထားရန် ဆရာ၀န်က တိုက်တွန်းနိုင်ပါသည်။ အသည်းအဆီဖုံး၍ ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့် အသည်းခြောက်ခြင်းေ၀ဒနာ ခံစားနေရသူများအတွက်မူ အသည်းအစားထိုးခြင်းသည် လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အသည်းအစားထိုးပြီးနောက် လူနာအခြေအနေမှာ အလွန်ကောင်းမွန်လာနိုင်သည်။
အသည်းအဆီဖုံးခြင်းကို ကုသရန်ဆေးဝါးများကိုရှာဖွေ၍ မတွေ့ရှိနိုင်သေးသော်လည်း သဘာ၀ပစ္စည်းအချို့သည် ဤရောဂါကုသရာတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်း သုတေသနပညာရှင်အချို့က လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဗီတာမင် E - ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းအနေဖြင့် အသည်းပျက်စီးမှုကို လျှော့ချခြင်းနှင့် ထပ်မံမဖြစ်ပွားအောင် တားဆီးနိုင်သည်ဟု ယူဆထားကြသည်။ သို့သော်ငြားလည်း ဗီတာမင် E သည် အမျိုးသားများတွင် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှု နှုန်းကိုမြင့်တက်စေသည်။
ကော်ဖီ - လေ့လာစမ်းသပ်မှုအရ ကော်ဖီသောက်သုံးသူမျာသည် မသောက်သူများထက် အသည်းပျက်စီးမှုနှုန်းလျော့နည်းသည်ကို တွေ့ရှိရသော်လည်း ကော်ဖီသည် အသည်းကိုမည်သို့အကျိုးပြုကြောင်း ကော်ဖီပမာဏမည်မျှကို သောက်သုံးသင့်ကြောင်းကိုမူသေချာစွာ မသိရသေးပေ။ အကယ်၍ ကော်ဖီမသောက်တတ်သူဆိုပါက အထက်ပါတွေ့ရှိချက်ကြောင့် ကော်ဖီသောက်ခြင်းအလေ့အထကို မစတင်သင့်သေးပါ။
- ကယ်လိုရီနည်းသောအစားအသောက်များ စားသောက်ခြင်းနှင့် ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းတို့သည် ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလျော့ကျစေနိုင်ပါသည်။
- ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အစားအသောက်များကိုရွေးချယ်စားသောက်ခြင်း (ဥပမာ - အသီးအနှံများ၊ အသီးအရွက်များနှင့် အစေ့များ)
- လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းကို ပိုမိုအချိန်ပေးခြင်း
- ဆီးချိုးရောဂါရှိသူများအနေဖြင့် ဆရာ၀န်နှင့်တိုင်ပင်၍ သကြားဓာတ်အဆမတန်မမြင့်တက်စေရန် ထိန်းသိမ်းပါ။ ဆေးပုံမှန်သောက်သုံး၍ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို အမြဲမပြတ်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
- သွေးတွင်းအဆီဓာတ်များနေပါကလျှော့ချခြင်း - အသီးအနှံများ ပိုမိုစားသုံးခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့် သွေးတွင်းအဆီကျစေသော ဆေးဝါးများကိုမှီ၀ဲခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်သင့်သည်။
- အသည်းကိုကာကွယ်ခြင်း - အရက်သောက်ခြင်းကဲ့သို့ အသည်းကိုထိခိုက်စေနိုင်သော အပြုအမူများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဆေးဝါးများကို အညွှန်းအတိုင်းသောက်သုံး၍လိုအပ်လျှင် ဆရာ၀န်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် -
- ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်မျှတသော အစားအသောက်ကိုသာရွှေးချယ်စားသောက်ပါ။ (အသီးအနှံ၊ အရွက်၊ သစ်ဥသစ်ဖုများ၊ မပြည့်၀ဆီ)
- လေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးပါ။